Naing BSell | Item - ယွန်းယွန်း အသား-ထိုင်းပိုး(အနံလွန် ၃ကိုက်) အပ်ချပ်-အကျစ် (Quality အမြင့်) ရည်လျော်ခံ မီးပူတိုက်ခံသည် ကိုက်မပြည်တာ အပ်ချပ် ကျဲတာ ပြထားတဲ့ ပုံနဲ လွဲတာများ တာဝန်ယူသည် 21000 ကြာချိန် ၅ရက်smp
ယွန်းယွန်း အသား-ထိုင်းပိုး(အနံလွန် ၃ကိုက်) အပ်ချပ်-အကျစ် (Quality အမြင့်) ရည်လျော်ခံ မီးပူတိုက်ခံသည် ကိုက်မပြည်တာ အပ်ချပ် ကျဲတာ ပြထားတဲ့ ပုံနဲ လွဲတာများ တာဝန်ယူသည် 21000 ကြာချိန် ၅ရက်smp
mk wallet size-20cm 14500 Prepaid Girl
ပိုးစပန့် အနံကြီး ဝမ်းဆက် 6500 အသားအေးအေးလေးနဲ့ အရမ်းဝတ်လို့ကောင်းတယ် mt
ဂျော် လက်ဝဲ အရမ်းလှ 😍 Freesize အစဉ် စုံ ၅ထည်တစ်တွဲ Ws-8000 အရမ်းလှ 😍မ1
😢Perfect Oilလေးမလိမ်းမိရလေခြင်းဆိုပြီး အင်္ကျီဝတ်တိုင်းလက်မောင်းတွေကြီး ကြတ်ထုတ်နေလို့နောင်တတွေရနေပြီလား? 😢Perfect Oilလေးမလိမ်းမိရလေခြင်းဆိုပြီး စကတ်တိုဝတ်တိုင်းလည်းခြေသလုံးတွေကြီး ကြည့်ရဆိုးပြီးတုတ်ခိုင်နေလို့နောင်တရတွေရနေပြီလား? 😢Perfect Oilလေးမလိမ်းမ
အဆင်းရှပ် ၂ရောင် ၄ထည်စည်း freesize （7000） 004j
အပ်ချပ်-အကျစ် (Quality အမြင့်)
ကိုက်မပြည်တာ အပ်ချပ် ကျဲတာ
ပြထားတဲ့ ပုံနဲ လွဲတာများ တာဝန်ယူသည်
21000 ကြာချိန် ၅ရက်smp